iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #365 by Mathew3120
Ndandifuna ukubuza umbuzo malunga gxumeki, xa guys uhlaziye gxumeki zakho ngenxa addons.Will le gxumeki endala kuba nako ukukhuphela addons okanye ngaba kufuneka ukukhuphela mela kwakhona kunye nomfakeli entsha.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #366 by rikoooo
Kufuneka umxokozelo le mela kwakhona, gxumeki ezintsha belungele P3D zakutshanje kunye FSX Steam, qala Ukusuka kuguqulelo installer 10.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #374 by rufgar
Mholo. Kutshanje ndakhuphela Pilatus pc-9 eligcinele wakho kunye eneenkcukacha yendawo engagqibekanga belufumaneka fsx kwaye fsx-umphunga. Mna yakhutshelwa zigxunyekwe fsx-zomphunga kwaye isebenza kakuhle ngaphandle usebenzsa. Ingaba kukho isiziba le okanye i kufuneka ukulayisha kwakhona? Enkosi.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #376 by Gh0stRider203
rufgar wabhala: Molo. Kutshanje ndakhuphela Pilatus pc-9 eligcinele wakho kunye eneenkcukacha yendawo engagqibekanga belufumaneka fsx kwaye fsx-umphunga. Mna yakhutshelwa zigxunyekwe fsx-zomphunga kwaye isebenza kakuhle ngaphandle usebenzsa. Ingaba kukho isiziba le okanye i kufuneka ukulayisha kwakhona? Enkosi.
ngoko usebenzsa abazange yifake, ukuba oko xa bethetha? Afuna nje qiniseka ukuba sele kwiphepha elinye ngaphambi kokuba uqale ecebisa iimpahla
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: rufgar
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #377 by rufgar
Ewe cockpits kukho apho kodwa izxhobo azisebenzi.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #378 by Gh0stRider203
kakuhle, xa Ndibaleka Gold Edition, ukususela oko kuqonda ukuba ngoxa kodwa bamisele kulawulo eyahlukileyo kunokuba Steam, ingqiqo yam kukuba xa ufumana kulawulo FSX kwi umphunga, yonke into efanayo (NCEDA ndilungise ukuba ' m engalunganga).
Kufuneka ube uyakwazi yifake ngathi eqhelekileyo, ngoko yisa nje yonke into ezineenkcukacha ezifanelekileyo. Ndiza sithandabuze oku wenza ntoni wena?
Uza kufuneka Ndixolele lol zange ndikhe kusetyenziswa FSX Edition Steam LOL uYehova uyazi ukuba ndingaze kufuneka sifumane kuyo, gonna kuba intlungu yobukumkani ahem uyayazi into yonke ... ahhh iimpahla ndinalo Lmao eneenkcukacha i mean..My FSX kuphela eyahlukeneyo kulo ERM 67.2 .... lol
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #379 by rufgar
Ayinako ukufaka ngqo fsx-umphunga. Kufuneka kukotshwe fsx. Oku kuthetha izxhobo eyahlukileyo yoqwalaselo kufuneka wadalwa ukuze asebenze. Akukho izxhobo kwam fsx uya ukusebenza umphunga.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #380 by rufgar
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #381 by Gh0stRider203
kubekho (ubuncinane ithiyori) abe eneenkcukacha izxhobo kwi uguqulelo umphunga ....
Lemme kumbamba ezinye neetshomi, mhlawumbi baya kukunceda ngcono kunam
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #382 by rufgar
Enkosi neqabane kuthakazelelwa kakhulu
Ixesha ukwenza page: 0.789 imizuzwana